China Cotton Canvas Knit Kudzivirira Basa Gloves ine Nhema PVC Dots vagadziri uye vanotengesa | Joysun
Cotton Canvas Knit Dziviriro Yekushanda Giravhosi neBlack PVC Dots
Muenzaniso Nhamba: CTDP101
Chinyorwa: donje kanivhasi, donje rakarukwa cuff, pvc machira
Chigadzirwa zita: Cotton Canvas Knit Kudzivirira Basa Gloves ine Nhema PVC Dots
Keyworkds: donje basa gurovhosi, Ruoko Grip, Painter, Mechanic, Gardening Glove, mota, imba yekuchengetera, utsanana, vanofambisa, kuvaka, pombi dzemvura, masonry, kubata zvinhu, lawn / gadheni, kurima, uye kupenda magurovhosi.
Chigadzirwa Ruvara: beige, nhema madota
Zviyero: 26CM / 10.5 INCH Kureba
Mashoko: kanivhasi kanivhasi, donje rakarukwa cuff, pvc madota
Yakagadzirwa nekotoni canvas - aya magurovhosi anopa nyaradzo uye zvakakosha kuchengetedza ruoko. Pamusoro pezvo, donje rinobatsira kupinza ziya kuti ribatsire kuchengeta maoko akasununguka.
Re-usable Gloves -Magorovhosi asina kuraswa inzira irinyore uye inodhura inoita kuti ruoko ruchengetedze pabasa. Kupesana nemagirovhusi anoraswa, magurovhosi aya anoitirwa kushandiswa kwakawanda, kukuchengetedza mari nekufamba kwenguva sezvo usiri kuakanda kunze kwekushandisa kwese. Kwete chete ivo vanobatsira kudzivirira kubva mukucheka uye kupaza, asi zvakare zvinobatsira kuchengeta maoko ako akachena uye achidziya. Iwo akakwana epamusoro-giredhi rinorema-basa mhando magiravhusi.
PVC Rubber Dotted - PVC yakazara magiravhusi anopa zvese zvakanakisa dziviriro uye kubata. Aya magurovhosi anobatsira kudzivirira kubva kune tsvina uye zvinokuvadza zvinhu, nepo iwo madhi ePV achivimbisa kubata kwakachengeteka, zvichideredza zvakanyanya tsaona.
Vakasimba Sure Grip - magurovhosi aya anobatsira kuchengetedza maoko kubva kunopinza mativi esimbi, ceramics, girazi nezvimwe zvinhu. Iwo madonhwe pamativi ese ari maviri anopa kubatisisa kwechokwadi, uye usarega izvo zvauri kushanda kuti zvitsve pamaoko ako.
Yakatambanudzwa kunyaradzwa uye kukwana - magurovhosi aya ari nyore kuvharwa nekudzimwa, uye anokodzera hukuru hwamaoko. Aya magurovhosi ebasa ane chigunwe chakazara chakarukwa ribbing, iyo inochengetedza zvigunwe, chanza uye ruoko kubva mukukanganisa kukuvara mune chero mamiriro ekushanda.
donje kanivhasi, donje rakarukwa cuff, pvc madota
Beige, nhema madota
ukuru 10.5 ”
66g / gumi nemaviri
31 * 17 * 11cm / gumi nevaviri, 12pairs / opp bhegi
inoshandiswa mumotokari, imba yekuchengetera, utsanana, vanofambisa, kuvaka, pombi dzemvura, masonry, kubata zvinhu, lawn / gadheni, kurima, uye kupenda
Pashure: shava Cowhide rakakamurwa Chikopa nguva yechando Basa Gloves
Zvadaro: Cow Grain Ganda Basa uye Mutyairi Gloves neCow Split Leather Palm Patch
CTHM101 inopisa chigayo magurovhosi
Cotton Brown Jersey Giravhosi Work Knit Ruoko
CT102 donje kanivhasi magurovhosi gauntlet cuff
JS104 juzi magurovhosi
Cotton Canvas basa magurovhosi
CTHM103 donje inopisa chigayo magiravhusi gauntlet